पत्रकारले मेलम्ची पानीको रिपोर्टिङ राम्रोसँग नगरेको भन्दै रि’साए प्रधानमन्त्री ओली:: Mero Desh
पत्रकारले मेलम्ची पानीको रिपोर्टिङ राम्रोसँग नगरेको भन्दै रि’साए प्रधानमन्त्री ओली
Published on: २१ चैत्र २०७७, शनिबार ०८:२५
काठमाडौं । ‘काठमाडौंमा नै संवाददाता छैन, लाइभ हेर्ने रिपोर्टर छैन । यस्ता छन् पत्रकार । तर, यस्ताहरु छन् । मामुली कुरा उचाल्छन् तर, राष्ट्रिय म’हत्वका कुरा उठाउँ दैनन मेलम्ची काठमाडौंमा पानी आउने कुरा युगान्तकारी कुरा हो । राष्ट्रिय अखबारले काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आएको समाचार दिँदैनन् । अनि राजीनामा मागियो प्रधान मन्त्रीको भनेर हेडलाइन बनाउँछन् ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार बालुवाटारमा पत्रका रहरुविरुद्ध खनिनु भयो । एकैपटक १ सय ६५ वटा सडक नि’र्माणको शुभारम्भ का’र्यक्रममा बोल्दै मामुली कुरा उचाल्ने तर, राष्ट्रिय महत्वका कुरा नउठाउने भन्दै पत्रकार को झाँको झार्नुभयो । मिडियाले मेलम्ची खानेपानीको विषयलाई महत्वका साथ प्र’काशित नगरेर अतिरञ्जित गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार देशमा त्यस्तो खालको राष्ट्रिय म’हत्वका कुरा उठाउने मिडिया नै नेपालमा छैन यसअघि उहाँले भन्नु भयो, ‘काकाकुल भनिएको काठमाडौंलाई तृप्त बनाउका लागि मेलम्चीको पानी त ल्याइयो ।हामीले भगिराथले गंगा ल्याएको भनिएको सुनिएको त थियो । हामीले मेलम्चीको पानी ल्याएर देखायौँ ।’
सरकारले गरेको सिन्को भाँचेको नदेखेको पनि उहाँको आरोप छ । गरेको काम नदेख्ने तर, राजनीति भाँड्ने काम गरेको, नेवारी संस्कृति विनाश गर्न लागेको भन्दै नेवारहरु उठ्नुपर्यो, फाँसीवाद आयो भनेर भन्ने गरेको उहाँले बताउ नुभएको छ । ५७ अर्ब १० करोड लागतमा १ सय ६५ सडक सञ्जाल नि’र्माण योजना अघि बढाइएको प्रधान मन्त्री ओलीले बताउनुभएको छ ।
साथै, अबको ३ वर्ष अर्थात् २०८० भित्र यी सडक योजना हरु नि’र्माण गरिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिलान्यास गरिएका १ सय ६५ वटा सडक नि’र्माणका योजनाहरु समयमै सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छु । कार्य सम्पादन, पुँजीगत खर्चको समयमै सदुपयोग, गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । साथै, आयोजनासँग स’म्बन्धित मन्त्रा लय, विभाग र सरोकार निकायहरुलाई समयमै काम सम्पन्न र राम्रोसँग रेखदेख गर्न अनुरोध गर्छु ।’
यदि समयमै काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा पर्ने प्रतिकूल असरमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ । विकास सरकारको मात्र नभएर सबै तह र निकायको साझा सरोकारको विषय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।विकास निर्माणप्रति अत्यन्त संवेदनशिल भए अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।
काम गर्ने सिलसिलामा बीचमा अवरोध भए छानबिन हुँदै जाने तर, काम रोक्न नपाइने उहाँले बताउनुभयो ।यसबीच मा कति बाटा निर्माण भएका छन् ? भन्ने सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङबाट जानकारी पाएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको छ ! news24Nepal